Rose of Sharon: Busyအောက်တိုဘာ
ခုတလောတွေမှာ တကယ်ကိုမအားတာ… ဘလော့လေးကိုပစ်ထားရတာ စိတ်တော့မကောင်း…ဒါပေမဲ့ ခလေးနှစ်ယောက် တလှည့်စီနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်ဘက်မှလှည့်မကြည့်အားအောင်ကို စိတ်တွေပူပြီး ညတောင်မအိပ်နိုင်အောင်ပါဘဲ… ကိုယ်မှေးခနဲအိပ်ပျော်သွားချိန် သူတို့တွေ အဖျားတက်မှာ တခုခုဖြစ်မှာစိုးရိမ်တာနဲ့ ကောင်းကောင်းမအိပ်ရဲဘူး…
သူတို့နေပြန်ကောင်းပြန်တော့ ကိုယ့်ပတ်စပို့သက်တမ်းတိုးဘို့ပြင်ရပြန်ရော… ဟိုချီမင်းမှာ သံရုံးမရှိတော့ သံရုံးရှိရာ ဟနွိုင်းကိုသွားဘို့ပြင်ဆင်ရတော့တယ်… ကိုယ်သွားမယ်ဆို ကိုယ့်ရဲ့မီးရထားတွဲကြီးကတန်းလန်းတန်းလန်း… ခလေးနှစ်ယောက်ရယ်၊ ရန်ကုန်ကခေါ်လာတဲ့အိမ်အကူရယ် ကိုယ့်အတွက်ရယ်…လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်၊ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်တင်ပြီး ဟနွိုင်းကိုပြေးရပြန်တယ်…
ဟနွိုင်းကသံရုံးမှာမနက်လျှောက်လွှာတင်၊လက်ဗွေနှိပ်ပြီးထားခဲ့၊ညနေသွားပြန်ယူ၊ အစစအရာရာအဆင်ပြေပါတယ်…နောက်နေ့ ဟနွိုင်းမှာတနေကုန်လျှောက်လည်တယ်… နောက်တနေ့မှာဆိုင်ဂုံပြန်ရောက်တယ်…
ဆိုင်ဂုံပြန်ရောက်ချိန်ခလေးတွေကျောင်းပိတ်ထားတုန်းမို့ ခလေးတွေသွားစစ်ဘို့ ရက်ချိ်န်းယူ၊ဆေးခန်းသွားနဲ့ အဲဒီတပတ်လည်း သူငယ်ချင်းတွေအတွက်အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့။
၂၁ရက်နေ့ညနေမှာစိတ်မကောင်းစရာကြုံရတယ်… ကိုယ်တို့နေတဲ့ဝင်းထဲမှာလာနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတစ်ချို့ကကြောင်တွေကို မွေးတတ်ကြတယ်… သူတို့အလုပ်တာဝန်ပြီးဆုံးလို့ သူတို့နိုင်ငံအပြီးပြန်ကြတဲ့အခါ တချို့က မွေးထားတဲ့ကြောင်လေးတွေကို ထားခဲ့တတ်ကြတယ်… ကိုယ်က အဲလိုကျန်ခဲ့တဲ့ကြောင်လေးတွေကိုသနားပြီး ကိုယ့်အိမ်ခြံဝင်းထဲမှာခေါ်ထားလေ့ရှိတယ်… အဲလိုခေါ်ထားရင်းနဲ့ ကိုယ့်ခြံထဲနေမှာနေတဲ့ကြောင်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်… အဲဒီအများကြီးထဲကနောက်ပေါက်တဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကို ခွေးကိုက်သွားတယ်…ကိုက်တာထက် ကိုယ်တို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ခွေးနှစ်ကောင်အဲဒီကြောင်လေးကိုဆွဲနေတာ… ကိုယ်တို့လင်မယားခွေးတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးကြောင်လေးကိုလှောင်အိမ်လေးထဲထည့် အစာကျွေးပြီး ဆေးခန်းပို့ဖို့လုပ်တော့ တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်မှာဆေးခန်းတွေက ပိတ်တယ်… အင်တာနက်ကနေရှာတော့ ခပ်ဝေးဝေးတနေရာမှာဖွင့်တဲ့ဆေးခန်းတခုရှာတွေ့တာနဲ့ ဆေးခန်းပို့ဖို့အဲဒီကြောင်လေးကို ခေါ်တော့ သူအသက်မရှိတော့ဘူး… ကိုယ့်မျက်စိရှေ့တင်ဖြစ်သွားတာမို့ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်…သမီးလေးဆို နောက်နေ့မနက်ထိငိုတုန်း… ကိုယ်ကတော့ တပတ်လောက်အကြာမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေသေးပေမဲ့ သူ့ကံဘဲလေလို့ ဖြေတွေးလို့ရသွားတယ်…
ခလေးတွေကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့ ဒီဇင်ဘာကျောင်းပိတ်ရက်အတွက် အပန်းဖြေခရီးထွက်ဖို့ စီစဉ်ရပြန်ရော…
ဒီတပတ် ကျောင်းမှာ Halloween ပွဲလည်းရှိတော့ costumeရှာဝယ်ရသေးတယ်… ဒီနေ့တော့ အဲဒါတွေဝတ်ပြီးကျောင်းသွားကြလေရဲ့…
မနေ့က ဘလော့ရေးမှခင်ဖြစ်ပေမဲ့ ငယ်ပေါင်းကြီးဖေါ်တွေလို ရင်းနှီးသွားပြီး ချစ်ခင်တွယ်တာရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့မွေးနေ့မို့ ဖုန်းဆက်နှုတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်… သူ့အတွက် ဝယ်ထားတဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးတော့ လူချင်းတွေ့မှပေးတော့မယ်…
ဒီအောက်တိုဘာလထဲမှာ အလုပ်တွေရှုတ်နေလိုက်တာ ခုမှဘလော့ပို့စ်တင်ဖြစ်တယ်…
နောက်လတော့ ရေးလက်စတန်းလန်းလေးတွေ အပြီးသတ်ဖြစ်မလား မသေချာသေး…
ခလေးတွေကြီးလာရင်တော့ တခြားဘလော့ဂါမောင်နှမတွေလို ပုံမှန်ရေးနိုင်မယ်ထင်ရဲ့….
ခုတော့ ဘလော့လေးက ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် အသက်ဆက်နေရရှာတယ်…
Robin Hood နဲ့ Lady Vampire ကျောင်းသွားခါနီးအိမ်ကအထွက်
Posted by rose of sharon at 9:44 AM
မြတ်မွန် October 31, 2012 at 10:58 AM
သတိရကြောင်း တစ်ချက်လောက် pokeလိုက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် အမ နော်ဖော..:D
ညီရဲ October 31, 2012 at 11:41 AM
ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ ဆိုတော့ တို့ အစ်မလဲ တကယ်ကို အလုပ်ရှုပ်နေမှာပါဘဲ... နောက်လ အပြီးသတ်မယ့် ပိုစ့်အသစ်လေးတွေကိုလဲ မျှော်နေပါ့မယ် အစ်မ...
လရိပ်အိမ် October 31, 2012 at 11:46 AM
စံပယ်ချို October 31, 2012 at 11:56 AM
မနော်ရေ အလုပ်များတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်လိုက်ရတော့
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Robin Hood နဲ့ Lady Vampireကိုလဲ နုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်လို့
ညီလင်းသစ် October 31, 2012 at 3:40 PM
အိမ်ရှင်မ အလုပ်ဆိုတာ တခြားစီးပွားရှာတဲ့ အလုပ်တွေလို format မရှိပေမယ့် အဲဒါတွေ အားလုံးထက် ပိုပြီး အလုပ်များတယ် မဟုတ်လား၊ ဒီလိုပဲ အလုပ်များရင် ဝေးနေလိုက်၊ အချိန်လေး နည်းနည်းရရင် ပြန်လာလိုက်နဲ့.... အဆင်ပြေသလို ပေါ့လေ...နော။း) ကလေးတွေလည်း မျက်စိအောက်မှာတင် ချစ်စရာကောင်းစွာနဲ့ ကြီးပြင်းလာကြတယ်...။
Anonymous October 31, 2012 at 4:54 PM
Aunty Oo October 31, 2012 at 7:29 PM
PhyoPhyo November 1, 2012 at 2:17 AM
သမီးနဲ့ သားလေးက ချစ်စရာကောင်း။
Happy Halloween Rose and Family!
An Asian Tour Operator November 1, 2012 at 1:03 PM
ကလေး နှစ်ယောက် နဲ့ မအားဘူး။ ဟုတ်တယ်။ :)
rose of sharon November 1, 2012 at 2:14 PM
မိုင်ခိ: မနက်ထဲက မန့်နေတာ ဂူးဂဲလ် အကောင့်နဲ့ရော မနောမဲနတ် နဲ့ရော Name/URL နဲ့ရော တခုမှ မတတ်သွားဘူးဟ
1 Nov 12, 02:31 AM
မိုင်ခိ: မန့်နေတာ ဘာလို့မတတ်လဲ မသိဘူး ဖောရေ..... ကလေးတွေ နေမကောင်းတာ မနေ့က ဘာလို့ မပြောတာတုန်း လူဆိုးမ..... ငါလဲ ကြောင်လေးခွေးလေးတွေအများကြီးမွေးဘူးတယ်.... ခဏခဏလဲ ညှက်ရည်ထွက်ရတယ်.....
မောင်မျိုး November 2, 2012 at 3:47 PM
ကိုယ့်ရဲ့ ရထားတွဲကြီးဆိုလို့ သဘောကျသွားတယ်း)
အစစ အဆင်ပြေပါစေဗျာ ။
Shinlay November 4, 2012 at 2:20 PM
မန့်ကြည့်လိုက်ဦးမယ် သူငယ်ချင်း.. :D
Anonymous November 4, 2012 at 10:15 PM
ခုမှ ရတယ် ဟိဟိ
sosegado November 5, 2012 at 7:44 PM
:P November 10, 2012 at 6:44 PM
ကလေး ၂ ယောက် သိပ်ချောတယ် အစ်မ..
ဒီမှာ ၁ ယောက်တည်းနဲ့ မအားနေတာ.. အစ်မ ကလေး ၂ ယောက်နဲ့ အရမ်းအလုပ်များနေမှာ ကိုယ်ချင်းစာတယ်။